Mogadishu Journal » 2018 » August » 8
Mjournal :-Xoghayihii Joogtada ee Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraaynta Masiibooyinka Maxamed Cumar Macalin ayaa iska casilay xilkii wasaaraddaasi. Warqadda is casilaadda ayuu ku sheegay inuu isku casilay duruufo adag oo u saamixi waayey inuu sii wato shaqadii uu u hayey wasaaradda...
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay ka dib booqasho ay ku tageen Magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan. Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa intii uu ku sugnaa dalka...
Mjournal :-Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa sheegay in dhibaatooyin ay ka jiraan wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo, isagoo ugu baaqay dowladda dhexe inay si degdeg ah arrintan wax uga qabato. Xildhibaan Afaraale...
Mjournal :-Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa maanta laga helay Meydadka labo ruux oo Oromo ah, kuwaasoo oo la sheegay in la dilay. Qaar ka mid ah dadka kunool Boosaaso ayaa Warbaahinta u sheegay in labadda ruux Mid ka mid ah Qoorta laga jabiyay sidaasna uu ku...
Mjournal :-Xaaladda Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaalida ayaa maanta degan, waxaana halkaasi howlgallo ka wadda Ciidamada Milatrariga. Ciidamada Milatariga Itoobiya ayaa wali gacanta ku haaya Magaalada Jigjiga, waxaana guud ahaan Magaalada laga saaray Ciidamada...
Mjournal :-Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan Qaraxyo ka dhacay Suuqa Xoolaha gaar ahaan Agagaarka Sos, kuwaasoo lala eegtay Ciidamo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. Sidda ay sheegeen Goobjoogayaal laba Qarax ayaa lala eegtay Ciidamada AMISOM, oo...
Mjournal :-Diyaarad Millatari oo nuuca Helicopter-ka ah ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa ay ka dejisay Madaxweynihii hore ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo laba maalmood ka hor xilka ku wareejiyay Axmed Cabdi Maxamed Ilkacase. Ciidan...
Mjournal :-OLF ayaa magaalada Asmara ee caasimadda dalka deriska ah ee Eritrea oo saldhig u ah jabhaddaasi heshiis nabadeed kula saxiixatay dowladda Itoobiya, colaadda u dhaxeysa dowladda Itoobiya iyo jabhadda Oromada ee OLF ayaa sababtay in kumannaan qof oo Oromo ah ay dalka...
Mjournal :-Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay khilaafka dhanka diplumaasiyadeed ee u dhaxeeya dalalka Sacuudiga iyo Canada. Goor sii horraysay, ayaa Wasiirka Arrimaha dibadda Sacuudiga, Adel al-Jubeir, waxaa uu Canada ku eedeeyey faragalin arrimaha gudaha ah...